ရေပေါ်တံတားနှင့်နေသောလူသွားလမ်း - တရုတ် Gormeet ပလတ်စတစ်
တစ်ဦးကရေပေါ်တံတားကလူကိုရေကူးဦးဆောင်သည့်ပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးရန်ဆောက်လုပ်ထားသည်, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကယာယီအသုံးပြုရန်နှင့်ရေပေါ်တံတားမကြာခဏအမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်စဉ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတည်နေရာမှာ reassembly များအတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ Gormeet သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာကူညီရန်တံတားများနှင့်ဖို့အတွက် walkway ၏ဒီဇိုင်းအတွက်ကူညီနိုင်တယ်, ကျနော်တို့အပေါ်-ရေဖြစ်ရပ်များနှင့်အစိုးရ agen ၏ကော်မတီကစည်းရုံးရေး, စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ကြပါပြီ ...
တစ်ဦးကရေပေါ်တံတားကလူကိုရေကူးဦးဆောင်သည့်ပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးရန်ဆောက်လုပ်ထားသည်, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကယာယီအသုံးပြုရန်နှင့်ရေပေါ်တံတားမကြာခဏအမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်စဉ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတည်နေရာမှာ reassembly များအတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Gormeet သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာကူညီရန်တံတားများနှင့်ဖို့အတွက် walkway ၏ဒီဇိုင်းအတွက်ကူညီနိုင်တယ်, ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံ 25 နှစ်ကိုလယ်ပြင်၌အကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကို လုပ်. , On-ရေဖြစ်ရပ်များနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများကော်မတီကစည်းရုံးရေး, စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
Floating Cube မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆ polyethylene အစေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။ အဆိုပါ Cube သင်လိုချင်သောအဖြစ်မည်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်စုဝေးနိုင်, ထိုသို့တိုးချဲ့သို့မဟုတ် disassemble ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
တံတား Floating could used in the scenic spots, rivers, parks, to make people across the surface of the water or have more chances to play in the water. The unti-skid design make sure you are safe on the bridge. You can also add our rails along both sides of the floating bridge. It could be use inapeace water or water with waves.